Nepal Dayari | पि’डि’त इरानी चियावालालाई श्रीमतीले नै ढोका थु’ने’र नि’का’लिदिएपछि आयो सहयोग(भिडियो हेर्नुस)
माघ १९, २०७८ बुधबार १४६ पटक हेरिएको
केही समय अगाडीको कुरा हो इरान जन्मथलो भएका र नेपाललाई कर्मथलो बनाएका आर्यन नेपाली नाम गरेका एक इरानी मोहम्म्द नाम गरेका शरणार्थी काठमाडौं असन इन्द्रचोकमा घरघर र पसलपसल गर्दै थरमसमा चिया बोकेर बेच्दै हिड्ने गर्थे र उनी यहि पेशाले गर्दा जताततै भाइरल बनेका थिए । बिहानको नौ बजेदेखि लिएर बेलुकीको नौ बजेसम्म उनी सडकमा ग”ल्लीमा चिया बेचिरहेको अबस्थामा भेट्टिन्थे । मज्जाले नेपाली बोल्ने उनी आफुलाइ सुरुसुरुमा चिया कसरी बनाउने भन्नेबारे केही ज्ञान नभएको पनि बताएका थिए ।
केहि समयअगाडि उनै इरानी युबक आर्यन आफ्नि वर्षा नाम गरेकि श्रीमती जो नेपाली एक नेपालि थिइन उनैको साथमा मिडियामा पनि आएका थिए । उनिहरुको माया एकदमै लो”भ”ला”ग्दो रहेको थियो । उनिहरुको माया देखेर कसको मनचाहिँ छुएन होला र ! मिडियामा नै रु”वा”बासी चलेको थियो उनिहरुको । आफ्नी श्रीमती बर्षाको मिडियामा नै निधारमा चु”मेका थिए उनले । उनिहरु दुबैजना भा”वुक बनेका थिए दुबैजनाको आखा आँ”सुले भ”रिएका थिए ।
वर्षा आफ्नै देशको कुनै मान्छेसग बिबाह गरेको भए मेरो पारिवारिक समस्या देखेर छोडिदिन्थ्यो होला तर आर्यनले कहिले त्यस्तो गरेन भन्दै भा”वुक पनि बनेकीथिइन उनी । चिया बेच्ने क्रममा बर्षाको भेट आर्यनसग भएको थियो र उनिहरुको प्रेमकहानी दाजुबहिनिबाट सुरु भएको कुरा पनि उनिहरुले खुलाएका थिए । उनिहरुको प्रेमकहानी एकदमै मज्जेदार रहेको थियो, कसैले सोच्न पनि सक्दैनथ्यो कि उनिहरुको मायामा कसैको नजर पर्नेछ भनेर ।
तर अचानक हिजो भने उनै इरानी युबक डा”को छा”डे”र रु”दै आफ्ना दु”खहरु ब्यक्त गर्दै मिडियामा आएका थिए । सासुआमाले आफुलाइ त”ना”ब दिएको र आफू र आफ्नो श्रीमतीको बिचमा आएको बताउदै उनी आफ्ना गु”ना”सा”हरु ब्यक्त गर्दै मिडियामा आएका थिए । सासुआमाले आफ्नी श्रीमती बर्षालाइ नानी फ्या”ल्नको लागि द”बा”ब दिइरहेको उनले बताएका थिए । आफ्नो श्रीमतीसग कुरा हुन नै नदिने र बिचमा आएर नानी फ्या”क्दे भनेर द”बा”ब दिएको उनको भनाइ थियो । आफ्नो श्रीमतीको दिदिले पनि बच्चा फ्या”ल्नलाई आफ्नो श्रीमतीलाई द”बा”ब दिएको उनको भनाइ रहेको थियो ।
क”ठै ब”रा डा”को छा”डे”र रु”ए उनि, आफ्नो श्रीमतीको कान सासुआमाको मुख सुन्नेगरेको उनी बताउछ्न । क”ठै उनी म मेरो स”म”स्या कसलाइ सुनाउ भन्दै रु”न्छ”न उनी । नेपाल सरकारले मेरो समस्यालाई सम्बोधन गरिदियोस भन्ने उनको चाहना रहेको छ । श्रीमतीले आफ्नो कुरा सुन्न छा”डे”को र सासुआमाले भने यसले हाम्रो कुरा बुझ्दैन यो बाहिरवाट आएको भन्दै हे”ला गर्ने गरेको उनी बताउछिन । मेरो बच्चालाई किन फा”ल्ने, म पाल्न सक्छु भन्दै बि”लौ”ना गर्छन उनि । दिनभरी दु”ख गरेर घरैमा आउनेगरेको आफ्नो केही ग”ल्ती नभएको उनी बताउछन ।
यसैक्रममा आज भने इरानी आर्यनको दु”ख देखि नसहेर काठमाडौं स्वयम्भु निवासी कृष्ण लामा नाम गरेका एक पुरुष उनको लागि सहयोगका साथ मिडियासामु आएका छन । यसअघि पनि उनले आर्यनलाइ सहयोग गरिसकेको र पुन सम्बन्ध बि”च्छेद भएको थाहा पाउनासाथ आफू सहयोग लिएर आएको उनी बताउछन । दु”खमा परेको मान्छेले मात्र अरुको पनि दुख देख्छ, उनी पनि श्रीमतीबाट पि”डि”त रहेछ्न र हाल उनी एक्लै बस्दै आएको कुरा पनि उनले बताए । उनले आर्यनलाइ दुई हजार पैसासहित दुइवटा थर्मस र केहि प्लास्टिकका गिलास सहयोग गरेका छ्न ।
श्रीमती बर्षाले उनलाइ छोडेर गएको र आमालाइ छोडेर आफुसग बस्न नसक्ने बताएको उनको भनाइ रहेको छ । उनी बस्दै आएको घरमा ता”ला लगाएर हिडेकि रहेछिन वर्षा आफ्नो परिवारसग । आफुलाई श्रीमतीको दाजु दिदी लगायत सबैले हातपात गरेको बताउछ्न उनी । क”ठै आर्यन ! सासुलाइ पनि हेर्छु तर श्रीमानश्रीमती सगै बस्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता रहेको छ । तर श्रीमतीले आफुलाइ अलिकति पनि सपोर्ट नगरेको र आफ्नो माया नगरेको उनी बताउछन । हाल उनी साथिको बस्दै आएको र सपना श्रीमतीलाई नै देख्नेगरेको बताउछ्न ।
थप जानकारीको लागि हेर्नुस भिडियो तलको लिंकमा दिइएको छ भिडियो: